မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ရာသီနဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔ သင္ သိထားစရာ ၈ ခ်က္ – Gentleman Magazine
မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ရာသီနဲ႔ ပါတ္သတ္လို႔ သင္ သိထားစရာ ၈ ခ်က္
မိန်းကလေးတွေရဲ့ ရာသီနဲ့ ပါတ်သတ်လို့ သင် သိထားစရာ ၈ ချက်
ဒါေပမယ့္ မိန္းကေလးေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္တဲ့ အျခားအရာေတြလိုပဲ ဒီဟာကလဲ အဲဒီေလာက္ မ႐ုိးစင္းပါဘူး။ သင္ ဘယ္ေတာ့မွ အဲဒီဟာကို ခံစားရမွာ မဟုတ္ေပမယ့္ သိသင့္တာေလးေတြ သိထားတာ အက်ိဳး႐ွိပါတယ္။ ဒီ Guide ကို ဖတ္ၿပီးရင္ သင္ သေဘာေပါက္မွာပါ။
ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေယာက္်ားေလးေတြ မသိၾကပါဘူး။ သင္ သိရင္ေတာ့ ေနာက္တစ္ခုကို ေက်ာ္သြားပါ။ မသိဘူးဆိုရင္ေတာ့ လတိုင္းမွာ သူမရဲ႕ သားအိမ္အတြင္းနံရံဟာ ၿပိဳကြဲၿပီး က်ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေသြးအျပင္ တစ္႐ႈးေတြ၊ ေသြးခဲေတြ ပါမွာပါ။
ကိုယ္ဝန္ရဖို႔ဟာ သူမရဲ႕ သားဥနဲ႔ သင့္ရဲ႕ သုတ္ေကာင္နဲ႔ ေတြ႕မွ ရမွာပါ။ သူမရဲ႕သားဥေႂကြခ်ိန္ဟာ သူမရဲ႕ ရာသီစက္ဝန္းနဲ႔ ဆိုင္ေနပါတယ္။ ၂၈ ရက္ စက္ဝန္း႐ွိသူ မိန္းကေလးဆိုရင္ ၁၄ ရက္ ပါတ္ဝန္းက်င္မွာ ေႂကြမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ သားဥဟာ ေႂကြၿပီးရင္ ၄၈ နာရီ ႐ွင္ႏိုင္ၿပီး သုတ္ေကာင္က ၇၂ နာရီ ႐ွင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ သူမ ၁၄ ရက္ေျမာက္မွာ ေႂကြရင္ ၁၁ ရက္ေန႔ကေန ၁၆ ရက္ေန႔အတြင္း ဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ပါတယ္။
ရာသီလာေနတုန္းဆက္ဆံရင္ ကိုယ္ဝန္မရဘူးဆိုတာ ယံုတမ္းစကားပါ။ မိန္းမတိုင္းမွာ ရာသီစက္ဝန္းဟာ ပံုမွန္မဟုတ္ပါဘူး။ ဥပမာ ရာသီစက္ဝန္းတိုတဲ့ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္ဟာ ရာသီရပ္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ သားဥေႂကြႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါကို သင္က ရာသီေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဆက္ဆံလိုက္ရင္ သင့္သုတ္ေကာင္ဟာ သားဥေႂကြတဲ့အခ်ိန္ထိ က်န္ေနႏိုင္ပါေသးတယ္။
သူမရဲ႕ စက္ဝန္းေတြက ပံုမွန္မဟုတ္ရင္ သားဥေႂကြခ်ိန္မွာ ျဖစ္တတ္တဲ့ အရည္နည္းနည္းထြက္တာကို ရာသီနဲ႔ မွားၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ ဆက္ဆံလိုက္ရင္ေတာ့ ကေလးရဖို႔ ေတာ္ေတာ္ က်ိန္းေသပါတယ္။
ရာသီအစစ္ မဟုတ္ေပမယ့္ ကိုယ္ဝန္ အႏုပိုင္း အခ်ိန္ေတြမွာ ေသြးအနည္းငယ္ က်တတ္ပါတယ္။ ေသြးက်တိုင္း ရာသီလာၿပီ ထင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္မ႐ွိဘူး မထင္ပါနဲ႔။ အဲဒီလို ေသြးက်တာဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းနဲ႔ ေဟာ္မုန္းအေျပာင္းအလဲေတြနဲ႔ ပါတ္သတ္ၿပီး မိန္းမတခ်ိဳ႕မွာပဲ ျဖစ္ပြားပါတယ္။ အခ်င္းျပသနာ႐ွိလို႔၊ ေနရာမွား သေႏၶတည္လို႔လဲ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
PMS ေခၚတဲ့ ရာသီမလာခင္ လကၡဏာေတြဟာ ေဟာ္မုန္းေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားရပါတယ္။ ရာသီမလာခင္ တစ္ပါတ္အလိုမွာ ပင္ပန္းျခင္း၊ စိတ္ေျပာင္းလဲမႈ ျမန္ျခင္း၊ အစားအေသာက္ မက္ျခင္း၊ ရင္သား အထိမခံ ျဖစ္ျခင္း၊ ႂကြက္တက္ျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိန္းမေတြမွာ ပိုသိသာေလ့ ႐ွိၿပီး တခ်ိဳ႕ေတြမွာေတာ့ PMDD ေခၚတဲ့ ပိုဆိုးတဲ့ အဆင့္ကို ၾကံဳရေလ့ ႐ွိပါတယ္။
PMDD မွာ စိတ္ဓာတ္က်လြန္းျခင္း၊ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းျခင္း၊ အႏၱရာယ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့အထိ အိပ္ခ်ိန္ပံုစံေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲဒီ လကၡဏာေတြ ေတြ႕ရရင္ ဆရာဝန္ဆီ သြားပါ။
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သားဥေႂကြခ်ိန္မွာ လိင္ကိစၥကို ပိုစိတ္ဝင္စားတတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူမရဲ႕ ဦးေႏွာက္ကေန သားအိမ္ နံရံတည္ေဆာက္တဲ့ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ သားအိမ္ လွံု႔ဆြ ေဟာ္မုန္း အမ်ားဆံုးထုတ္လုပ္ေပးၿပီး အဲဒီ ေဟာ္မုန္း အေျပာင္းအလဲေတြက သူမကို စိတ္ႂကြေစပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ အဲဒါဟာ သူမ လိင္ဆက္ဆံဖို႔ အသင့္ျဖစ္ေနတယ္ မဆိုႏုိင္ပါဘူး။ ကိုက္ခဲတာေတြဟာ လိင္ဆက္ဆံမႈ အဆင္မေျပေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေသြးထြက္ေနမႈကလဲ သူမကို ႐ွက္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕မိန္းမေတြက ဒီအခ်ိန္မွာ ဆက္ဆံရတာကို ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ သူမရဲ႕ ေပါင္းရင္းအဂၤါေတြမွာ ေသြးစီးဆင္းမႈ ပိုမ်ားလာလို႔ပါ။
အခြေခံတွေကိုတော့ သင်သိထားမှာပါ။ တစ်လတစ်ကြိမ် သူမ သွေးဆင်းတယ်။ အဲဒီလို ဆင်းရင် ကိုယ်ဝန် မရှိဘူး။
ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အခြားအရာတွေလိုပဲ ဒီဟာကလဲ အဲဒီလောက် မရိုးစင်းပါဘူး။ သင် ဘယ်တော့မှ အဲဒီဟာကို ခံစားရမှာ မဟုတ်ပေမယ့် သိသင့်တာလေးတွေ သိထားတာ အကျိုးရှိပါတယ်။ ဒီ Guide ကို ဖတ်ပြီးရင် သင် သဘောပေါက်မှာပါ။
၁. အဲဒါဟာ သွေးချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး
တော်တော်များများ ယောက်ျားလေးတွေ မသိကြပါဘူး။ သင် သိရင်တော့ နောက်တစ်ခုကို ကျော်သွားပါ။ မသိဘူးဆိုရင်တော့ လတိုင်းမှာ သူမရဲ့ သားအိမ်အတွင်းနံရံဟာ ပြိုကွဲပြီး ကျပါတယ်။ အဲဒီတော့ သွေးအပြင် တစ်ရှုးတွေ၊ သွေးခဲတွေ ပါမှာပါ။
၂. အချိန်ကိုက် ဆက်ဆံခြင်းဟာ ကလေးရနိုင်စွမ်း တိုးစေပါတယ်
ကိုယ်ဝန်ရဖို့ဟာ သူမရဲ့ သားဥနဲ့ သင့်ရဲ့ သုတ်ကောင်နဲ့ တွေ့မှ ရမှာပါ။ သူမရဲ့သားဥကြွေချိန်ဟာ သူမရဲ့ ရာသီစက်ဝန်းနဲ့ ဆိုင်နေပါတယ်။ ၂၈ ရက် စက်ဝန်းရှိသူ မိန်းကလေးဆိုရင် ၁၄ ရက် ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြွေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် သားဥဟာ ကြွေပြီးရင် ၄၈ နာရီ ရှင်နိုင်ပြီး သုတ်ကောင်က ၇၂ နာရီ ရှင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူမ ၁၄ ရက်မြောက်မှာ ကြွေရင် ၁၁ ရက်နေ့ကနေ ၁၆ ရက်နေ့အတွင်း ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ပါတယ်။
၃. ရာသီလာနေရင်လဲ ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ပါသေးတယ်
ရာသီလာနေတုန်းဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်မရဘူးဆိုတာ ယုံတမ်းစကားပါ။ မိန်းမတိုင်းမှာ ရာသီစက်ဝန်းဟာ ပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ ရာသီစက်ဝန်းတိုတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဟာ ရာသီရပ်ပြီး မကြာခင်မှာပဲ သားဥကြွေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင်က ရာသီနောက်ဆုံးရက်မှာ ဆက်ဆံလိုက်ရင် သင့်သုတ်ကောင်ဟာ သားဥကြွေတဲ့အချိန်ထိ ကျန်နေနိုင်ပါသေးတယ်။
သူမရဲ့ စက်ဝန်းတွေက ပုံမှန်မဟုတ်ရင် သားဥကြွေချိန်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အရည်နည်းနည်းထွက်တာကို ရာသီနဲ့ မှားပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ဆက်ဆံလိုက်ရင်တော့ ကလေးရဖို့ တော်တော် ကျိန်းသေပါတယ်။
သိထားဖို့က အဖေမဖြစ်ချင်ရင် ဘယ်တော့မှ အကာအကွယ်မဲ့ မဆက်ဆံပါနဲ့။
၄. ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်လဲ ရာသီလာနိုင်ပါသေးတယ်
ရာသီအစစ် မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ်ဝန် အနုပိုင်း အချိန်တွေမှာ သွေးအနည်းငယ် ကျတတ်ပါတယ်။ သွေးကျတိုင်း ရာသီလာပြီ ထင်ပြီး ကိုယ်ဝန်မရှိဘူး မထင်ပါနဲ့။ အဲဒီလို သွေးကျတာဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်းနဲ့ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး မိန်းမတချို့မှာပဲ ဖြစ်ပွားပါတယ်။ အချင်းပြသနာရှိလို့၊ နေရာမှား သန္ဓေတည်လို့လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၅. ကိုက်ခဲတာတွေက အရမ်းဆိုးပါတယ်
မိန်းမ ၈၀ ရာနှုန်းဟာ ရာသီလာချိန် ကိုက်ခဲလေ့ ရှိကြပြီး သုံးပုံတစ်ပုံကတော့ ကိုက်ခဲတာ ဆိုးလွန်းလို့ ပွဲတွေ လမ်းတွေ မတက်နိုင်တဲ့ထိပါ။
သူမ ရာသီစလာရင် သားအိမ်အတွင်းနံရံ ကြွေကျဖို့ အကူအညီပေးတဲ့ Prostaglandin ဟော်မုန်း တိုးလာပါတယ်။ အဲဒီဟော်မုန်းဟာ ကိုက်ခဲခြင်းကို ဖြစ်စေပြီး ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းကနေ ကျောကုန်း၊ ပေါင်တွေအထိ ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဝမ်းလျောတာလို အူပြသနာတွေလဲ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆. PMS ဆိုတာ တကယ်ရှိပါတယ်
PMS ခေါ်တဲ့ ရာသီမလာခင် လက္ခဏာတွေဟာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲမှုကြောင့် ဖြစ်ရတယ်လို့ ယုံကြည်ထားရပါတယ်။ ရာသီမလာခင် တစ်ပါတ်အလိုမှာ ပင်ပန်းခြင်း၊ စိတ်ပြောင်းလဲမှု မြန်ခြင်း၊ အစားအသောက် မက်ခြင်း၊ ရင်သား အထိမခံ ဖြစ်ခြင်း၊ ကြွက်တက်ခြင်း၊ စိတ်တိုလွယ်ခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တချို့မိန်းမတွေမှာ ပိုသိသာလေ့ ရှိပြီး တချို့တွေမှာတော့ PMDD ခေါ်တဲ့ ပိုဆိုးတဲ့ အဆင့်ကို ကြုံရလေ့ ရှိပါတယ်။
PMDD မှာ စိတ်ဓာတ်ကျလွန်းခြင်း၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှု လျော့နည်းခြင်း၊ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အထိ အိပ်ချိန်ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီ လက္ခဏာတွေ တွေ့ရရင် ဆရာဝန်ဆီ သွားပါ။
၇. သားဥကြွေတာဟာ သူမကို စိတ်ပိုကြွစေပါတယ်
အမျိုးသမီးတွေဟာ သားဥကြွေချိန်မှာ လိင်ကိစ္စကို ပိုစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူမရဲ့ ဦးနှောက်ကနေ သားအိမ် နံရံတည်ဆောက်တဲ့ ဟော်မုန်းနဲ့ သားအိမ် လှုံ့ဆွ ဟော်မုန်း အများဆုံးထုတ်လုပ်ပေးပြီး အဲဒီ ဟော်မုန်း အပြောင်းအလဲတွေက သူမကို စိတ်ကြွစေပါတယ်။
၈. ရာသီလာတာဟာ သူမရဲ့ လိင်စိတ်ကို ဖျက်ရင်ဖျက်၊ မဖျက်ရင် ပိုကြွအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်
ရာသီလာချိန်မှာ PMS ဟော်မုန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ Estrogen နဲ့ Progesterone တို့ ထုတ်လုပ်မှု များလာပြီး အကျိုးဆက်အနေနဲ့ မိန်းမတွေ လိင်စိတ် ခံစားမှု ပိုကြွလာပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ သူမ လိင်ဆက်ဆံဖို့ အသင့်ဖြစ်နေတယ် မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကိုက်ခဲတာတွေဟာ လိင်ဆက်ဆံမှု အဆင်မပြေအောင် လုပ်နိုင်ပြီး သွေးထွက်နေမှုကလဲ သူမကို ရှက်စေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့မိန်းမတွေက ဒီအချိန်မှာ ဆက်ဆံရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ သူမရဲ့ ပေါင်းရင်းအင်္ဂါတွေမှာ သွေးစီးဆင်းမှု ပိုများလာလို့ပါ။
Previous: ဘ၀မွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနတတ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ ?
Next: သင့္ကို သင့္ေကာင္မေလး ပစ္သြားရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း ၁၆ ခ်က္